မောင်ရင်ငတေ ** MAUNGYINNGATAY **** မောင်ရင်ငတေ ***: ဂျွန်နှစ်ဆယ့်တစ် ယွန်းပေါလ်ဆတ်ထ်နဲ့ ဂီတပွဲတော်
နွေယဉ်စွန်းချိန် Summer Solstice Illumination
of Earth by Sun on the Day of Summer Solstice on Northern Hemisphere
ဒီကနေ့ ဂျွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ကို Summer Solstice နွေယဉ်စွန်းချိန် (သို့မဟုတ်) နွေရာသီရဲ့ အစဦး ပထမနေ့လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်၊ တနှစ်မှာ သုံးရာသီရှိတဲ့ အာရှဒေသတို့ အမေရိကတို့နဲ့တော့ ထပ်တူမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်၊ ဥရောပမှာ ပြင်သစ်မှာတော့ နွေရာသီအဝင်နေ့အဖြစ် ပြောကြ ဆိုကြ ရေးသားကြတာကို တွေ့ရှိမိရပါတယ်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် ဂျွန်လ ၂၁ ရက်ကို သတ်မှတ်တယ် ဆိုပေမယ့် အတိအကျဆိုလို့မရတဲ့ သဘာဝတရားကြောင့် အချိန်နာရီကိုတော့ တိတိကျကျပြောလို့ မရနိုင်ပါဘူး၊ ပြင်သစ်မှာတော့ နွေရာသီအစဦးရက် ဆိုပေမယ့် မိုးသည်းသည်းမည်းမည်း ရွာနေတာ နှစ်စဉ်လိုပါဘဲ၊ ဒီနှစ်လည်း ဒီကနေ့မှာ မနက်ပိုင်းထဲက မိုးက ရွာလိုက်တိတ်လိုက်ပါပဲ၊ သိပ်များများ
ရွာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ နွေအဝင်ဆိုပြီး နေကျဲကျဲလည်း မပူပါဘူး၊
ဒီလို နွေအဝင် ယဉ်စွန်းချိန်နေ့မှာ
ပြင်သစ်ပြည်နဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေ ရေးမှတ်ထားတာကို ဖော်ပြ ချင်မိ တာပါ၊ သိပ် ပြီးတော့လည်း
ထူးထူးခြားခြား ကိစ္စတွေ မဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ဝင်စားတတ်သူတွေ အတွက်ကတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေပါ၊
ဂျွန်နှစ်ဆယ့်တစ်မှာ မွေးဖွားသူ ယွန်းပေါလ်ဆတ်ထ်
နဲ့ ဆီမွန်ဒဘိုးဗွား (Photo Google)
ဒီနေ့ ဂျွန် ၂၁ ရက်နေ့ကတော့
ကမ္ဘာ့ဂီတပွဲတော်နေ့ရယ် နွေအဝင်ပထမနေ့ရယ် ဖြစ်သလို ပြင်သစ်နိုင်ငံ
၂၀ ရာစုခေတ်ရဲ့ စာပေသမိုင်းမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သူ တဦးဖြစ်သူ Jean-Paul Sartre
ယွန်းပေါလ်ဆတ်ထ် (၁၉၀၅-၁၉၈၀) ရဲ့၁၀၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်၊
ပါရီမြို့တော်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ပါရီမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ပါရီမြို့သားစစ်စစ် တဦး
ဖြစ်ပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကတော့ များပြားလွန်း လှပါတယ်၊ ဒဿနပညာရှင် ဖြစ်တည်မှု ပဓာန ဝါဒသမား
ဝေဖန်ရေးသမား အဘိဓမ္မာဆရာ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ ဝတ္ထုရေးဆရာ ပြဇာတ်ရေးဆရာ အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးဆရာ
နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ကွန်မြူနစ်ပါတီ မဝင်ခဲ့ဖူးသူ မတ်စ်ဝါဒီ စာပေနိုဗယ်ဆုကို ငြင်းပယ်ခဲ့သူတဦး ဖြစ်ပါတယ်၊ ယွန်းပေါလ်ဆတ်ထ်ဟာ အရပ်က ငါးပေ သာသာ ၁၅၃ စင်တီမီတာသာ
သေးသလောက် စိတ်ဓါတ်ရေးရာမှာတော့ ပြတ်သားလှသူတဦးပါ၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်က
သူ့ကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ စာပေဆိုင်ရာနိုဗယ်ဆုကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ငြင်းဆို ခဲ့သူပါ၊ သူဟာ သူ့ကို
ပေးခဲ့တဲ့ ဆုများကို ငြင်းပယ်ခဲ့ယုံမျှမက ဂုဏ်ပြုပွဲတွေကိုလည်း ခပ်ဝေးဝေးက ရှောင်လေ့ရှိသူ
တဦးပါ၊ (အဲဒီ နောက်ဆုံးအချက်များကတော့ မောင်ရင်ငတေရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အ ချက်များပေ့ါ) သူ့ကိုဆုပေးသူများနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ယွန်းပေါလ်ဆတ်ထ်ရဲ့ ပြောလေ့ပြောထရှိတဲ့ စကားတခွန်းပါတဲ့
မောင်ရင်ငတေ ဘာသာတော့ မပြန်ပေးလိုက်တော့ပါဘူး၊ ကိုယ်တိုင်သာ ပြန်ကြည့်ပါရန်၊
“A Writer Should Not Allow Himself To Be Turned
Into An Institution”
Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre y ont résidé (1937-1939) (ဓါတ်ပုံ မရငတ)
ဆီမွန်ဒဘိုးဗွားနဲ့ ယွန်းပေါလ်ဆတ်ထ်တို့ တယောက်တခန်းစီ နေထိုင်သွားခဲ့ကြတယ်
ဆိုတဲ့ ပါရီမြို့ အမှတ် ဆယ့်လေးရပ်ကွက်က Hôtel Mistral ပါ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာလည်း
ဆီမွန်ဒဘိုးဗွား တယောက်ကတော့ မကြာခဏဆိုသလို လာ..လာနေပြီး စာတွေရေးလေ့ ရှိတတ်ပါတယ်တဲ့၊ သူတို့ နှစ်ဦးကို ရူးသွပ်ကြသူတွေလည်း ဒီကနေ့ထိတိုင် လာရောက် တည်းခိုလေ့ ရှိကြပါတယ်တဲ့
ခင်ဗျား၊ ၁၉၂၉ နှစ်မှာ ယွန်းပေါလ်ဆတ်ထ်ဟာ ပါရီမြို့သူ စာရေးဆရာမ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ သဘောတရားရေး ပညာရှင်
ဆီမွန်ဒဘိုးဗွား (၁၉၀၈-၁၉၈၆) နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် သူတို့နှစ်ဦးဟာ သေဆုံးခဲ့သည့်တိုင် လက်တွဲခဲ့သော်လည်း တရားဝင်ဆိုပြီး လက်ထပ်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး၊ ဝါသနာတူ
ရှိကြပါတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ သေလွန်ကြသည်အထိ အတူတူ
တတွဲတွဲ ရှိခဲ့ကြသလို အခုအခါမှာလည်း သူတို့နှစ်ဦးဟာ ပါရီမြို့လယ်ဆယ့်လေးရပ်ကွက်က နာမည်ကျော် မွန့်တ်ပါးနပ်စ် သုဿန်
(Cimetière du Montparnasse) မှာ အတူတကွ
Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre y ont résidé
(1937-1939) (ဓါတ်ပုံ မရငတ)
Je trichais quand je disais : on ne fait qu'un. Entre deux individus l'harmonie
n'est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir. »
« I cheated when I said there is one. Harmony between two individuals is
never given, it must be conquered indefinitely. »
La Force de l'âge. SIMONE DE BEAUVOIR
« Mais il est une chose qui ne change
point, ni ne peut changer, c'est que quoi qu'il arrive et quoi que je devienne,
je le deviendrai avec vous. »
« But there is one thing that does not change or cannot change, is that
whatever happens and whatever I become, I will become with you. » Lettre au Castor. JEAN-PAUL SARTRE
နေထိုင်သွားခဲ့ဖူးတဲ့ Hôtel Mistral ဟော်တယ်မျက်နှာစာအဝင်က အမှတ်တရ အလွမ်း စာကို အမှတ်တရ
de Beauvoir's House in Goxwiller, where Sartre tried to hide from the media
being awarded the Nobel Prize. (Photo
ညီမ ပန်းချီဆရာမ Hélène de Beauvoir နေထိုင်ရာ ပြင်သစ်ပြည် အရှေ့ပိုင်းက Goxwiller
ရွာလေးက အိမ်ပါ၊ ယွန်းပေါလ်ဆတ်ထ်တယောက် ၁၉၆၄ ခုနှစ်က စာပေ နိုဘယ်ဆုကို ငြင်းဆန်အပြီးမှာ
သတင်းတွေ အတင်းတွေအဖျင်းတွေ ကင်းလွတ်လေမလား ဆိုပြီးတော့ အဲဒီအိမ် ကလေးမှာ လာရောက် ခိုအောင်းရင်း
မောင်ရင်ငတေတော့ အဲဒီကို မရောက်ဖူးသေးလို့ ဂူဂဲလ်ကနေသာ ရှာဖွေပြီး
de la Musique ဂျွန်နှစ်ဆယ့်တစ်
Fête de la Musique à Paris 1er Arrondissement, Vendredi 21 Juin 2013 (ဓါတ်ပုံ မရငတ)
ပတ်သက်နေတာတခုကို ဆက်လက်ဖော်ပြရရင်တော့ လမ်းဘေးဂီတပွဲတော် ခေါ်တဲ့
Fête de la Musique ပါ၊ ယခင့်ယခင် နှစ်များဆီကတော့ နှစ်စဉ်လိုလို တခုတ်တရ အလေး ထားလို့
အားပေးခဲ့ရတဲ့ လမ်းနဘေးက အဆိုအက အလှတွေနဲ့ ဂီတပွဲတော်နေ့ တနေ့ပါ၊
ဂီတပွဲတော်နေ့မှာ ဆိုရင်းကရင်း ဆန္နတွေ ပြကြသူများ (ဓါတ်ပုံ မရငတ) ပြင်သစ်ပြည်မှာတော့ ဒီကနေ့ နွေရာသီစဦးနေ့ကို ကြိုဆိုကြတဲ့ အနေနဲ့ တမြို့လုံးအနှံ့ အပျော်တမ်း ဂီတပွဲလေးတွေကို ကျင့်ပခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ် ကျော်ခဲ့ပါပြီ၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ဆိုရှယ်လစ်သမတ François
Mitterrand ဖရန်ဆွာမီထရောင်း (၁၉၁၆-၁၉၉၆) အာဏာရရှိ လာပြီးတဲ့နောက်မှာ
သူ့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး
Jack Lang (၁၉၃၉ -…) နဲ့ ဂီတအကဒါရိုက်တာ Maurice Fleuret (၁၉၃၂-၁၉၉၀) တို့ကနေ ဦးစီးပြီး
La Fête de la Musique ဂီတပွဲတော်ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်
ရက်နေ့မှာ စတင် ကျင့်ပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ပထမဦးစွာ ဒီပွဲကို ကျင့်ပဖို့ အကြံရခဲ့သူကတော့ Radio France အသံလွှင့်ဌာနရှိ
France Musique ဌာနခွဲမှာ အလုပ်လုပ်နေသူ Lute ခေါ်
ရိုးရာဗျပ်စောင်း တူရိယာပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး
Joel Cohen (၁၉၄၂-...) ဆိုသူပါ၊ ဒီပွဲကို ဒီနေ့ဒီရက်ကို ရွေးချယ် ပြုလုပ်ရခဲ့ခြင်း အကြောင်းရင်းကတော့ နွေရာသီပထမနေ့ ဖြစ်တာရယ် ရာသီဥတုသာယာ ခြေခင်းလက်ခင်းကောင်းမွန်တဲ့အချိန်အခါ ဖြစ်တာရယ်ကြောင့်လို့ ဆိုကြပါတယ်၊ အခုအခါမှာတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၀ ကျော်က
မြို့ကြီးပေါင်း ၄၅၀ ကျော်မှာ ဒီနေ့ကို World Music Day အဖြစ် ကျင့်ပနေပါပြီ၊ ပါရီမြိ့မှာတော့ တနှစ်ထက်တနှစ် ဒီပွဲတော် ကျင့်ပခဲ့တာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမလာဘဲ အဖြစ်သဘောသာ ပြုလုပ်လာကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်၊ ဒီလို ပွဲလမ်း သဘင်မျိုးဟာ စိတ်ဝင်စား
ဖွယ်ရာ ကောင်းလှပေမယ့်လည်း ပွဲအတင်းဖြစ်မြောက်အောင်တော့ ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ရှင်မျိုးကမှ ဖန်တီးယူလို့
မရနိုင်ပါဘူး ဆိုတာကို သိသာ ထင်ရှားစေပါတယ်၊ ဘာမဟုတ်တဲ့ ဘယ်သူကမှ မခိုင်းစေခဲ့တဲ့
ပါရီ Pont des Arts တံတားက အချစ်သော့ခတ်သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သိသာ ထင်ရှားလှပါတယ်၊
Indian Musicians Playing the Flute, Vendredi 21 Juin 2013 (ဓါတ်ပုံ
အမေရိက Red Indians လူမျိုးတွေရဲ့ ဘယ်တော့မှ မရိုးနိုင်တဲ့ လမ်းဘေး တေးဂီတ အဖွဲ့တွေကတော့
အဲဒီဂီတ ပွဲတော်နေ့မှာ မပါမဖြစ်ပါရှိရမှာပါ၊ သူတို့တတွေရဲ့ တေးဂီတဝိုင်းတွေက ဒီနေ့လိုနေ့မျိုး
မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှ လမ်းဘေး ကွက်လပ်တွေမှာ ဒီလိုဘဲ လေမှုတ်တူရိယာတွေကို တီးမှုတ်ပြီး
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြတာက သူတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံလို့ ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ မှာတော့
သူတို့လိုတီးဝိုင်းတွေလည်း သိပ်များများစားစား မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး၊ ကြာလာရင်တော့ ဒီ Fête
de la Musique ဂီတ ပွဲတော်နေ့ဟာ ပါရီကနေ ပြင်သစ်ကနေ ကွယ်ပျောက်သွားဖို့ များလာနေပါပြီ၊
မောင်ရင်ငတေ ၂၀၀၆၂၀၁၃ http://moemaka.com/archives/1546 ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၃
နွေရာသီကို ကြိုဆိုရင်း မိုးရက်တွေ ကုန်လွန်ပါစေ ရာသီဥတု မှန်ကန်ပါစေ ဆုတောင်းရင်း သာယာ လှပ အေးချမ်းသော လောကကြီး ဖြစ်ပါစေလို့ . . . . . .. . . .. ……. ၂၀၁၃ ခုနှစ် နွေယဉ်စွန်းချိန်နေ့က
ရေးဖြစ်ခဲ့တာကို ပြန်လည်မွမ်းမံ ဖြည့်စွက် ရေးသားလိုက်ခြင်းပါ၊
မောင်ရင်ငတေ ၂၂၀၆၂၀၁၆ à